အေး-အသွေးတော် Killer သို့မဟုတ်အလွဲသုံးမှု၏နှိပ်စက်ခံရသူ?
ဂျိုဒီ Aria Meza, အရီဇိုးနားရှိသူ၏အိမ်တွင်သူမ၏ 30 ရက်နှစ်အရွယ်ရည်းစားဟောင်း Travis အလက်ဇန်းဒါးဇူလိုင်လ 15, 2008 ရက်တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနှင့်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်အသေသတ်ခြင်းကို stabbing ခဲ့သည်။ Aria သူမက Self-ကာကွယ်ရေးအတွက်အလက်ဇန်းဒါးသေဆုံးဟုဆိုသော်လည်းမလွန်ကျူးတောင်းပန်ကြ၏။
ဂျိုဒီအမ်း Aria ဝီလျံအန်ဂျလိုနှင့်စန္ဒီဃ Aria ရန်, ဇူလိုင်လ 9, 1980 ရက်နေ့တွင်, ကယ်လီဖိုးနီးယား, Salinas မွေးဖွားခဲ့သည်။ အဟောင်းဝက်အစ်မနှစ်ဦးနုပျိုညီအစ်ကိုနှမ: သူမသည်လေးမောင်နှမရှိပါတယ်။
အသက် 10 နှစ်မှာစတင်, Aria သူမ၏လူကြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုပြသသည်။ သူမရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှစ်ပေါင်းငျြးဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်သူမသည်သူမ၏မိဘများသစ်သားဇွန်းနဲ့တစ်ခါးပတ်နှင့်အတူသူမ၏ hit ဟုဆိုကာတစ်ဦးနှိပ်စက်သူငယ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမ 7-အသက်အခါအဆိုပါအလွဲသုံးစားမှုစွပ်စွဲစတင်ခဲ့သည်။
Aria 11 တန်းအတွက် Yreka ပြည်ထောင်စု High School တွင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်အမျိုးမျိုးသောအခြိနျပိုငျးအလုပ်အကိုင်များမှာအလုပ်လုပ်နေချိန်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံများတွင်သူမ၏အကျိုးစီးပွားကိုလိုက်မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။
2001 ၏ကျဆုံးခြင်းစဉ်အတွင်း Aria ရမေလတောင်, ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Ventana အင်းများနှင့် Spa မှာတည်ရှိပါတယ်စားသောက်ဆိုင်မှာဆာဗာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ စားသောက်ဆိုင်များအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အဖျော်ယမကာမန်နေဂျာသူ Darryl ဘရူ, စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းများငှားရမ်းခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်တာဝန်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။
Aria နှင့်ဘရူနှစ်ဦးစလုံးန်ထမ်းအိမ်ရာတှငျနထေိုငျနှင့် 2003 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်သူတို့ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က Aria 21 နှင့်ဘရူသူတို့တရားဝင်နေ့စွဲစတင်မတိုင်မီသူတို့ဟာပြီးသားအတူတူလိင်အတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည် 40 ခဲ့သည်။
ဘရူထိုကာလကပြောပါတယ်, Aria တစ်ဦးတာဝန်ရှိသည်, ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မေတ္တာရှင်လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
မေလ 2005 ခုနှစ်, Aria နှင့်ဘရူအုန်းကန္တာရ, California မှာအတူတူနေတဲ့အိမ်ကဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီ $ 2008 တစ်လ၏ပေါင်နှံငွေပေးချေ၏ထက်ဝက်ပေးဆောင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
Ventana မှာသူမ၏ဆာဗာ၏အလုပ်အကိုင်အစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလ 2006 ခုနှစ်တွင်ဂျိုဒီ, Prepaid ဥပဒေရေးရာများအတွက်အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။
သူမသည်လည်း Mormonism ဘုရားကျောင်းနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့စတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျမ်းစာသင်အံခြင်းနှင့်အုပ်စုသည်ပဌနာသအစည်းအဝေးများများအတွက် Mormonism ယုံကြည်ခြင်း၏နေသောအိမ်သို့ဧည့်သည်များရှိခြင်းစတင်ခဲ့သည်။
မေလ 2006 ခုနှစ်တွင်ဂျိုဒီသူမကဘုရားကျောင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးခံရခဲ့ရာကငျြ့သုံးနှင့်သူမ၏အနာဂတ်ခင်ပွန်းများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ချင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမမရှိတော့သူ့ကိုအတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆကျဆံရေးရှိစေချင်ကြောင်းဘရူသို့ပြောသည်။ ဒါဟာသူမရင်သား implants ရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်တစ်ချိန်တည်းန်းကျင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘရူအဆိုအရ 2006 ခုနှစ်နွေရာသီကာလအတွင်းဂျိုဒီ Prepaid ဥပဒေရေးရာနှင့်အတူသူမ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုတိုးမြှင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ငွေရေးကြေးရေးတာဝန်မဲ့ဖြစ်လာပြီးသူမလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်အတွက်အကြွေးအဘယျသို့အပါအဝင်သူမ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားပေါ်တွင် defaulting စတင်ခဲ့သည်။
ဆက်ဆံရေးဆိုးရွားစတင်အဖြစ်, ဘရူမိမိသားကိုပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ် Monterrey ပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအမံဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဂျိုဒီကိုယ်တော်နှင့်အတူရွှေ့ဖို့စီစဉ်မခံခဲ့ရခြင်းနှင့်အဲဒါကိုကိုရောင်းနိုင်သည်အထိသူမအိမျတျော၌ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
ဒီဇင်ဘာလ 2006 ခုနှစ်တွင်အဆုံးသတ်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို, သို့သော်, သူတို့မိတ်ဆွေများကဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ရံဖန်ရံခါတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုခေါ်လိမ့်မယ်။ နောက်တစ်နှစ်အိမ်တော်ကို foreclosure သို့သွားလေ၏။
Aria နှင့် Travis အလက်ဇန်းဒါး, စက်တင်ဘာ 2006 ခုနှစ်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ Las Vegas မှာ, နီဗားဒါး တစ် Prepaid ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများကွန်ဖရတက်ရောက်စဉ်။
အလက်ဇန်းဒါးကို 30 ကြီးတစ်ဦးစိတ်ခွန်အားနိုးစပီကာများနှင့် Prepaid ဥပဒေရေးရာများအတွက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Aria 28 ကြီး, Yreka ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင် Prepaid ဥပဒေရေးရာများအတွက်ရောင်းချမှုအတွက်အလုပ်လုပ်နေနှင့်သူမ၏ဓာတ်ပုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ နှစ်ခုနှင့်သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီးနောက် Aria သည်နှင့်အညီ, ဆက်ဆံရေးတစ်ပါတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာခဲ့သည်အကြားတစ်ဦးကိုချက်ချင်းဆွဲဆောင်မှုရှိခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင် Aria ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်အလက်ဇန်းဒါးတှငျနထေိုငျခဲ့ကွအရီဇိုးနား၌ရှိ၏။ သူတို့ကတော်တော်များများပြည်နယ်များမှအတူတူခရီးထွက်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဆိတ်ကွယ်ရာအီးမေးလ်များမှတဆင့်ကြီးပြင်းလာသောအခါ (82,000 ကျော်နောက်ဆုံးမှာဖလှယ်ခဲ့ကြသည်) နှင့်နေ့စဉ်ဖုန်းပေါ်မှာအတူတူပြောနေတာစတင်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 26, 2006 တွင်, Aria တစ်ကိုင်းရှိုင်း Mormonism သူအလက်ဇန်းဒါးနဲ့နီးစပ်ရဖို့, သူမ၏စကားများအတွက်နိုင်ရန်အတွက်အဆုံးစွန်သော-Day ကိုသူတော်စင်သားယရှေုခရစျ၏ဘုရားကျောင်းထဲသို့ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်။ သုံးလအကြာမှာအလက်ဇန်းဒါးနှင့် Aria ကိုသီးသန့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့ပြီးသူမကအလက်ဇန်းဒါးပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ကယ်လီဖိုးနီးယားကနေ Mesa, အရီဇိုးနား, ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
သူတို့အခါအားလျော်စွာအတူတကွလိင်ဆက်ဆံရန်ဆက်လက်ပေမယ့်ဆက်ဆံရေး, ဇွန်လ 2007 နှောငျးပိုငျးအတွက်အဆုံးသတ်ရေး, လေးလပတ်ပတ်လည်ကြာခဲ့သည်။ သူမအလက်ဇန်းဒါးမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Aria အဆိုအရဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင်အလက်ဇန်းဒါးခဲ့သူတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviant ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မတရား သူမ၏ရန်နှင့်သူမသည်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျွန်ဖြစ်လို။
ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ပြီးနောက်အလက်ဇန်းဒါးအခြားအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့ပြီးစွပ်စွဲ Aria စိတ်အားကြီးကြောင်းမိတ်ဆွေများညည်းညူ။ သူကသူမနှစ်ကြိမ်ကသူ့တာယာလျှော့ချခြင်းနှင့်သူ့ကိုရန်နှင့်သူချိန်းတွေ့ခဲ့သည်မိန်းမအားအမည်မသိအီးမေးလ်များကိုခြိမ်းခြောက်လှေတျတျောမူကွောငျးကိုမသင်္ကာ။ သူလည်းသူကအိပ်ပျော်စဉ် Aria ခွေးတံခါးကိုမှတဆင့်သူ့အိမ်ထဲသို့ snuck ခဲ့ကွောငျးမိတ်ဆွေများကပြောသည်။
ခံ၏တောင်းဆိုမှုများရှိနေသော်လည်း သွားရမည် , လက်ဇန်းဒါးနှင့် Aria မတ်လ 2008 စဉ်အတွင်းအတူတကွသွားလာဆက်လက်နှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းကြားဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Aria အဆိုအရသူမဟာအလက်ဇန်းဒါးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရည်းစားဖြစ်ခြင်း၏ပင်ပန်းကြီးပြင်းနှင့်ကသူမ၏သူမ၏အခန်းဖော်လက်ထပ်ပြီးနောက်အသက်ရှင်ရန်အခြားသောအရပ်တွေ့ရှိရန်အချိန်သို့ရောက်လာသောအခါ, သူမကယ်လီဖိုးနီးယားကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
သက်သေအထောက်အထားနှစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုဖလှယ်ဆက်လက်အကြောင်း, ပြီးနောက် Aria အရီဇိုးနားကျန်ရစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။
အလက်ဇန်းဒါးရဲ့သူငယ်ချင်းအဆိုအရဇွန်လ 2008 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိ Facebook အကောင့်နှင့်ဘဏ်စာရင်းသို့ hacking သူမ၏သံသယပြီးနောက် Aria ၏အလုံအလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကစွပ်စွဲသူသူမ၏အစဉ်အမြဲသူ၏အသက်တာထဲကနေချင်ခဲ့တယ်သူမ၏သို့ပြောသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းများအဆိုအရဇွန်လ 2, 2008 ရက်နေ့တွင်, Aria Redding, California မှာဘတ်ဂျက်ငှား-a-ကားနေတဲ့ကားကိုငှား, သူတို့သည်အတူတကွနှင့်အမျိုးမျိုးသောဝတ်လစ်စလစ် pose အတွက်လိင်ဆက်ဆံသူတို့ထဲကဓါတ်ပုံတွေကိုယူဘယ်မှာ Mesa အတွက်အလက်ဇန်းဒါးရဲ့အိမျမှကားမောင်း။
ဇွန်လ4ရက်နေ့တွင် Aria ကိုပြန်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှမောင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်-ငှားရမ်းမှုဖို့ငှားရမ်းကားတစ်စီးပြန်သွားကြ၏။
သူကအရေးပါသောအစည်းအဝေးလွဲချော်နှင့် Cancun, မက္ကစီကိုမှတစ်ဦးစီစဉ်ထားခရီးစဉ်တက်သည်ကိုပြသရန်ပျက်ကွက်သည့်အခါအလက်ဇန်းဒါးရဲ့သူငယ်ချင်းကသူ့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဇွန်လ9ရက်နေ့တွင်, သူ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးကိုမိမိအိမျကိုသှားပွီးလကျဇန်ဒားမြို့ထဲကခဲ့အခိုင်အမာသောမိမိအခန်းဖော်တနိုး။ ထို့နောက်သူသည်သော့ခတ်နဲ့သူ့ရေချိုးခန်းတင်းကုပ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအသေကောင်ကသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအလက်ဇန်းဒါးရဲ့အခန်းကိုစစ်တယ်။
ကလကျဇန်ဒားနဖူးများတွင်ပစ်သတ်ခဲ့ကြောင်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်အနေနဲ့သူသခှေဲစိတျခွငျးမှတဆငျ့, 27 ကြိမ်ထိုးနှင့်သူ၏လည်ပင်းပြတ်ခဲ့သညျ။
အလက်ဇန်းဒါးရဲ့လူသတ်မှုတွေကိုကိုင်တွယ်အဆိုပါစုံထောက်လူသတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာငြင်းမရသောအထောက်အထားတွေအများကြီးကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဤသည်ကိုဆေးကြောခဲ့ကြသည်ထင်ရှားသောအဝတ်လျှော်စက်, ၌တွေ့သောကင်မရာပါဝင်သည်။
ဒါဟာအလက်ဇန်းဒါး Aria '' ယောင်နှင့်အတူမကျေမနပ်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်းယေဘုယျအသိပညာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး Aria အလက်ဇန်းဒါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ခဲ့သော 9-1-1 ဖုန်းခေါ်နေစဉ်အလက်ဇန်းဒါးရဲ့သေခြင်း၌ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ယင်းစုံထောက်တို့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြတဲ့သူကတခြားမိတ်ဆွေတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းရဲ Aria အင်တာဗျူးသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံများနှင့် DNA ကိုရလဒ်များပြန်လည်ကောင်းမွန်
Aria ကိစ္စတွင်တာဝန်ခံ၌ပါသောစုံထောက်ကြီးတဲ့သူ Esteban Flores တောင်းဆိုစတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်လူသတ်မှုအသေးစိတ်အကြောင်းမေးနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ကူညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်သူမရာဇဝတ်မှုမသိခဲ့ရပြီးသူမနောက်ဆုံးဧပြီ 2008 ခုနှစ်ကအလက်ဇန်းဒါးကိုတှေ့မွငျခဲ့ကွောငျးပြောဆိုထားသည်။
အလက်ဇန်းဒါးရဲ့သူငယ်ချင်းအများအပြားပြုသကဲ့သို့ဇွန်လ 17 ရက်နေ့မှာ Aria, သူ့ကိုယ်သူ DNA ကိုများအတွက်လက်ဗွေနှိပ်နှင့် swabbed ခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
နှစ်ရက်လက်ဗွေနှိပ်ခံရပြီးနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အဝတ်လျှော်စက်၌တွေ့သောကင်မရာများ၏မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ထဲကနေဆယ်ယူခဲ့သောဓါတ်ပုံများ၏တစ်ဦးစီးရီးအကြောင်းကိုသူမ၏မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဇွန်လ 4, 2008 ရက်တွင်အချိန်တံဆိပ်ထုသောဓါတ်ပုံများ, သူသေဆုံးခဲ့ရသည်ဖွယ်ရှိမိနစ်မှီ, ရေချိုးခန်းအတွင်းအလက်ဇန်းဒါး၏ရုပ်ပုံများကိုပြသသည်။ ကြမ်းပြင်သွေးထွက်ပေါ်မှာတုံးသူ့ကိုပုံရိပ်တွေလည်းရှိခဲ့သည်။
ဖျက်ပြီးသော်လည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သောအခြားရုပ်ပုံများ, ထိုနေ့ရက်တွင်အချိန်တံဆိပ်ထုလည်း, ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့လိုက်စားရာထူးအတွက် စုပေါင်း. , ဂျိုဒီဖြင့်ပြီးကြ၏။ Aria သူမကဧပြီလကတည်းကအလက်ဇန်းဒါးမမွငျခဲ့ကွောငျးအပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့ဆက်ပြောသည်။
တစ်ပတ်အကြာတွင်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုလူသတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာတွေ့ရတဲ့တစ်ဦးသွေးထွက်သံယိုပုံနှိပ် Aria နှင့်အလက်ဇန်းဒါးကိုက်ညီကြောင်း DNA ကိုပါရှိသောကြောင့်ပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့သည် DNA ကို အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာရှာတွေ့ဆံပင်ပေါ် Aria မှပွဲစဉ်။
ပန်းပွင့်ကသူ့မိသားစုကိုစလှေတျတျောနှငျ့သူမ၏ MySpace စာမျက်နှာပေါ်တွင် Travis အကွောငျးမတ်ေတာမက်ဆေ့ခ်ျ posted ခံရဖို့အတှကျအောကျပါရက်သတ္တပတ်ကျော်, Aria အလက်ဇန္ဒားများအတွက်အောက်မေ့ဖွယ်ဝန်ဆောင်မှုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူ့အဖွားတစ်ဦးရှည်ကိုယ်ချင်းစာစာတစ်စောင်ရေးစီစဉ်ခဲ့သည်။
Aria '' မွေးနေ့ကိုခဲ့သည့်ဇူလိုင်လ 9, 2008 တွင်တစ်ဦးကယ်လီဖိုးနီးယားခမ်းနားဂျူရီပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှုအပေါ်သူမ၏စွဲချက်တင်။ ခြောက်ရက်ပတ်လုံးအကြာတွင်သူမအဖမ်းခံရနှင့်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုနှင့်စက်တင်ဘာလများတွင်သူမခံခဲ့ရခံခဲ့ရ လွှဲပြောင်း ရုံးတင်စစ်ဆေးရင်ဆိုင်ဖို့အရီဇိုးနားရန်။
ရုံရက်ပေါင်းအရီဇိုးနားအတွက်အကျဉ်းခံရပြီးနောက်ဂျိုဒီ Aria ဟာအရီဇိုးနားသမ္မတနိုင်ငံနှင့်အင်တာဗျူးတွင်ခွင့်ပြုခဲ့။ အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းသူမသည်အပြစ်မဲ့ခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာနဲ့အလက်ဇန်းဒါး၏လူသတ်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်သူမ၏ DNA ကိုလူသတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမရှင်းပြချက်ကိုပေး၏။
တစ်ဦးကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်စက်တင်ဘာလ 24, 2008 ရက်နေ့တွင်, ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲ, "အတွင်းပိုင်း Edition ကို" ကိုလည်း Aria အင်တာဗျူး, ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်သူမသူအသတ်ခံရကြောင်းပြုသူနှစ်ဦးကျူးကျော်သူတွေကခဲ့ကြောင်းသောအခါသူမအလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
သူမသည်သူမကသူမတစ်ဦးနေအိမ်ကျူးကျော်ဟုခေါ်တွင်သောအရာကိုစဉ်အတွင်း "အံ့ဖှယျနညျးဖွငျ့ခမျြးသာရ" ခဲ့ဟုဆိုသည် 2009 ခုနှစ်, ဇွန်လ 23 ရက်နေ့တွင် "48 နာရီ" ကိုအခြားအင်တာဗျူးအတွက်လူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ သူမ၏ဇာတ်လမ်းအရ, အလက်ဇန်းဒါးသည်သူ၏ကင်မရာအသစ်နှင့်အတူလှည့်ပတ်ကစားခဲ့ခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်သူသည်ကိုယ်ကိုကျယ်သောပေါ့ပ်ကြားနာပြီးနောက်ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူမမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမချဉ်းကပ်, လူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အနက်ရောင်ကိုဝတ်ဆင်နှစ်ဦးစလုံးကိုမြင်တော်မူ၏။ သူတို့ကတစ်ဦးဓါးနှင့်တစ်ဦးသေနတ်သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ သူမသည်ယောက်ျားသည်သူမ၏မှာသေနတ်ထောက်ပြနှင့်ခလုတ်ဆွဲ, သို့သော်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ကပြောသည်။ သူမသည်ထို့နောက်အလက်ဇန်းဒါးထွက်ခွာအိမ်တော်ထဲကပြေးလျက်, နောက်ကျောကိုကြည့်ခဲ့ပါဘူး။
သူမကသူမ၏အသက်အဘို့ကြောက်လန့်သောကြောင့်ရဲခဲ့ပါတယ်တောင်းဆိုသူကဘယ်သူမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းဟန်ဆောင်ခဲ့သည်မဟုတ်သူမရဲ့အကြောင်းပြချက်ကရှင်းပြသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်, သူမနောက်ကျောကယ်လီဖိုးနီးယားမှကားမောင်း။
အဆိုပါ Maricopa အဘိဓါန်ကောင်တီရှေ့နေချုပ်ရုံး, အထူးသဖြင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏နှင့်ညံ့သညျ့ထုံးစံ၌ထွက်သယ်ဆောင်ဂျိုဒီ Aria ၏ရာဇဝတ်မှုများကိုဖော်ပြထားနှင့်ဆည်းကပ် သေဒဏ် ။
လမတိုင်မီ ရုံးတင်စစ်ဆေးစတင်ဖြစ်ခဲ့သည် , Aria သူသည်ကိုယ်ကိုကိုယ်စားပြုချင်သည်ဟုတရားသူကြီးကိုပြောသည်။ အဆိုပါတရားသူကြီးနေသမျှကာလပတ်လုံးရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းလက်ရှိအများပြည်သူနောက်ခံလူရှိခဲ့အဖြစ်ပြုလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
တစ်ဦးကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Aria သူမကစွပ်စွဲထားအလက်ဇန်းဒါးကရေးသားခဲ့ကြကြောင်းသက်သေအထောက်အထားသို့အက္ခရာများရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ စာလုံးများတွင်အလက်ဇန်းဒါးတစ် pedophile ဖြစ်ခြင်းမှဝန်ခံခဲ့သည်။ စာလုံးစမ်းသပ်ပြီးနှင့်အတုခံရဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအတုရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ရက်အတွင်း, Aria သူမကကျော်တရားဝင်သူမ၏ဦးခေါင်းနှင့်သူမ၏ဥပဒေရေးရာအကြံပေးပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသောတရားသူကြီးကိုပြောသည်။
ဂျိုဒီ Aria ဆန့်ကျင်တရားစီရင်မှု Hon နှင့်အတူ Maricopa အဘိဓါန်ကောင်တီ Superior တရားရုံးထဲမှာဇန်နဝါရီလ 2, 2013 တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ရှယ်ရီ K. Stephens ဦး။ Aria တရားရုံးမှခန့်အပ်ထားသောရှေ့နေ, အယ်လ် Kirk က Nurmi နှင့်ဂျနီဖာ Willmott, Aria Self-ကာကွယ်ရေးအတွက်အလက်ဇန်းဒါးအသတ်ခံရကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတရားခွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-stream ကြီးနှင့်လျင်မြန်စွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ Aria သည့်ရပ်တည်ချက်အပေါ် 18 အပြည့်အဝရက်အတွင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်သူမ၏မိဘများကစော်ကားခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော, Travis အလက်ဇန်းဒါးနှင့်အတူသူမ၏လိင်ဘဝအကွောငျးရငျးနှီးအသေးစိတ်ကို shared နှင့်ဆက်ဆံရေးနှုတ်နဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကြမ်းတမ်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့သည်။
15 နာရီကြာဆွေးနွေးပြီးနောက်, ဂျူရီပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှု၏ Aria အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မေလ 23, 2013 တွင်နေစဉ်အတွင်း စီရင်ချက်ချအဆင့် , ထိုဂျူရီတစ်ဦးတညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ တစ်ဦးကစက္ကန့်ဂျူရီအောက်တိုဘာလ 20, 2014 တွင်ကျင်းပ, ဒါပေမဲ့သူတို့လွန်း၏မျက်နှာသာအတွက် 11-1 deadlocked ခဲ့ကြသည် သေဒဏ် ။ သေဒဏ်စားပွဲပေါ်မှာချွတ်ယခုခဲ့ပေမယ့်အကြောင်း, Stephens အထိစီရင်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ထားခဲ့တယ်။ ဧပြီလ 13, 2013 တွင်, Aria ရိုး၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲဘဝကိုထောင်ဒဏ်ခဲ့သည်။
Perryville နှင့် high-အန္တရာယ်အဆင့်ကို5အကျဉ်းသားအဖြစ်ခွဲခြားနှင့်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် - သူမကလက်ရှိတွင်အရီဇိုးနားပြည်နယ်အကျဉ်းထောင် Complex မှာနေထိုင်နေပါတယ်။
Micaela Costanzo ၏လူသတ်မှု
အဲလ်ဘတ် DeSalvo ဘော်စတွန် Strangler ခဲ့သလား
အမြိုးသမီးတကက်သရင်း Foster ၏ 1980 ခုနှစ်လူသတ်မှုအတွက်အဖမ်းခံရ
ဒါ့အပြင်အဆိုပါ Craigslist Killer အဖြစ်လူသိများဖိလိပ္ပု Markoff ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်နှင့်အတူကို Magic Make9နည်းလမ်းများ
အလုပ်ဥပမာပြဿနာ wavelengths မှကြိမ်နှုန်းပြောင်း
ဂရိဒဏ်ဍာရီ - Biblos vs. သမ်မာကမျြး
'' အဆိုပါယနေ့ညပြရန် '' ၏သမိုင်းအကျဉ်း
သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာ - စားပွဲတင်တင်းနစ် / Ping-Pong အတွက်ရေမြှုပ် vs Hardbat?
7 aportaciones က de los hispanos (လက်တင်အမေရိကန်တွေ) က Estados UNIDO
တစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏အလေးချိန် Shift အတွက်သင့်က Hip Abductor ကြွက်သားကိုခိုင်ခံ့စေ
ဗေ့ခ်ျမော်ဒယ် 10ML-II ကို Smokeless Powder Muzzleloading ရိုင်ဖယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Cherchez la femme - ဆုံးသောလိင်အရအခွင့်အရေးပြင်သစ် Expression
Boys များအတွက်ဟီဘရူးအမည်များ (နယူးဇီလန်)
ခရစ်ယာန် Band သတို့သမီး၏ Dale Thompson ကထံမှအိတ်ဖွင့်ပေးစာ
တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ် Carburetor Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦးဘိုးဘေးဘုန်းကြီးကျောင်း Up ကို Set - ဘိုးဘေးယဇ်ပလ္လင်
Dottie ငရုတ်ကောင်း: အပြင်းထန်သော LPGA ဗိုလ်မှူး Winner ၏ဇီဝ
Beginners များအတွက်ဂျာမန်: ကျွန်မရဲ့မိသားစု